स्वास्थ्य – Page2– YesKathmandu.com
काठमाडौं । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको अनशन विरुद्ध सरकारकै पक्षमा वकालत गर्दै चिकित्सकहरुको एउटा समूहले आज त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा धर्ना दिएको छ। २३ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा. केसीको आन्दोलनका विरुद्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका
कांग्रेस सच्चिएको हो की सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडा ओकलेको हो ?–लेखनाथ न्याैपाने
काठमाडाैं । पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपालनेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस दलाल पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो धारणा लेखेका हुन्
पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारी सिसियूमा, नेकपाद्वारा स्वास्थ्यलाभकाे कामना
काठमाण्डाै । सत्तारुढ नेकपाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । बिहीबार पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको हो। गत माघ दुई गते
हाेसियार ! फ्राइ चिकेन र माछा धेरै खाने गर्नुभएकाे छ ?
काठमाण्डाै । फ्राइ गरिएको चिकेनको मासु सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै हानीकारक रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले दैनिक ‘फ्राइड चिकेन’ खाने महिलामा १३ प्रतिशत मृत्यु जोखिम हुने देखाएको छ। फ्राइ
मन्त्री यादव भन्छन् : सरकारले डा. केसीलाई धाेका दिन हुँदैन
काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता सरकराले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री यादवले खाफु पनि आन्दोलनबाट आएकाले आन्दोलनमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने